संक्रमित होम आइसोलेसनमा : स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक १० हजार भत्ता – Khabar PatrikaNp
संक्रमित होम आइसोलेसनमा : स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक १० हजार भत्ता
August 9, 2020 81
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालका आइसोलेसन भरिँदै गएका छन् । लक्षण नदेखिएका र स्वास्थ्यमा समस्या नभएका संक्रमितलाई घरमै आइसोलेट गर्न थालिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएमा संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्न सकिने गरी २ महिनाअघि नै निर्देशिका जारी गरेको थियो।
सोही निर्देशिका अनुसारका मापदण्ड पालना गरी संक्रमितले चाहेमा वा अस्पतालमा ठाउँका अभाव भएमा घरमै बस्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरु सम्बन्धित स्थानीय तहको निगरानीमा होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। संक्रमितको निगरानी र स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताउनु भयो।
एक जना स्वास्थ्यकर्मीले होम आइसोलेसनमा बसेका ५० जना संक्रमितको निगरानी गर्नुपर्ने प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ । एक जना बिरामी हेरेबापत स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक २०० सयका दरले पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने जानकारी प्रवक्ता गौतमले दिनुभयो । यस अनुसार एक जना स्वास्थ्यकर्मीले होम आइसोलेसनका संक्रमितको फलोअप गर्दा ५० जनाको २०० का दरले दैनिक १० हजारसम्म भत्ता लिन सक्ने देखिएको छ।
‘संक्रमितको फलोअफमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीले फोन एसएमएसबाट दिनमा कम्तिमा दुई पटक संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएर त्यसलाई अध्यावधिक गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। घरमा बसेका संक्रमितको अवस्थाबारे नियमित रुपमा स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ।
Prevबागमती प्रदेशलाई तिब्बत सरकारद्वारा १३ करोडको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
Nextगर्भवती महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि भेरी अस्पतालको प्रसूति वार्ड सिल
बाबुआमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेशमा यता छोराको मृत्यु…!
बाघ भालुसँग भिड्ने ड;रला’ग्दो भोटे कुकुर भेटियो (भिडियो)
आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार श्री पशुपतिनाथको दर्सन गरि साउन २६ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस। मनकामना पुराहुनेछ
तिन बर्ष देखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22504)